सरोज केसी : नेपालकै एक मानक मिडिया(पर्सोना) :: Press Chautari ::
सरोज केसी : नेपालकै एक मानक मिडिया(पर्सोना)
जनवरी २६, २०१३, काठमाण्डौं
सरोज के.सी. नेपाली मिडियाकर्ममा परिचय गराइरहनुपर्ने नाम हैन, यो आफैंमा एक सुपरिचित नाम अनि स्थापित ब्राण्ड होे । रेडियो जकी (आरजे) र भिडियो जकी (भीजे) दुबै रुपमा उत्तिकै लोकप्रिय यो नाम विगत १७ वर्षदेखि नेपाली मिडियामा एक छत्र राज गरिरहेको छ । तुलनात्मक रुपमा पछि विकास भएको नेपाली ब्रोडकास्टिंग मिडियामा पहिलो पुस्ताका यी सञ्चारकर्मीले नेपालमा आरजे र भीजे पनि मिडिया पर्सोना हो भन्ने नयाँ मान्यता स्थापित गरे । उनले स्थापना गरेको यही मान्यताका कारण आज नेपालमा आरजे र भीजे पनि मूलधारका सञ्चारकर्मीका रुपमा मान्य छन्, स्थापित छन् । उनले मूलतः ललितकलाका दुई मूल विधा चलचित्र र संगीतमा आफ्नो सञ्चारकर्म केन्द्रित गरे । आज नेपालमा रेडियो र टेलिभिजनमा चलचित्र र संगीतका कार्यक्रमहरु अपरिहार्य हुनुमा उनको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ ।
औपचारिक पढाइले इञ्जिनियरिंगका विद्यार्थी सरोज थोरै अपवादमा पर्छन् जसले पढेरभन्दा पनि परेर मिडियाकर्ममा आफ्नो सर्वोच्चता स्थापित गरे । नेपालमा परेर मिडियामा स्थापित भएका र हुन खोजेकाहरुका लागि उनी रोल मोडल नै हुन् । मिडियाकर्ममा लागेका तन्नेरी पुस्ताका नेपालीहरु उनको मानक सफलतालाई हेरेर भन्ने गर्छन्, इमान्दारिताका साथ प्रयास गर्यो भने मिडियाकर्ममा पढेर मात्र हैन, परेर पनि गर्न सकिन्छ । यस बीचमा उनले पत्रकारिता, एंकरिंग, रेडियो टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण र अभिनयको प्रशिक्षण चाँहि लिएका छन् ।
पूर्वी नेपालको झापामा सन् १९७९ मा जन्मिएका सरोज आफ्नै संघर्षले मानक बनाएका सञ्चारकर्मी हुन् । सन् १९९९ मा मुलुककै राजधानीमा अवस्थित केएटीएच एफएम ९७.९ बाट रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोता (आरजे) का रुपमा ब्यावसायिक मिडियाकर्म सुरु गरेका सरोज यतिबेला बेलायती सेनामा रहेका नेपालीमूलका सैनिक र उनका परिवारको सूचना, शिक्षा, अभिप्रेरणा र मनोरञ्जनका लागि सञ्चालित रेडियो बीएफबीएस गोर्खा रेडियोमा कार्यक्रम निर्माता एवं प्रस्तोताका रुपमा कार्यरत छन् । विश्वका ६३ भन्दा बढी मुलुकमा प्रसारण हुने यो रेडियो हरेक सञ्चारकर्मीका लागि स्वप्नगन्तव्य हो जसमा सरोज तीनवटा लोकप्रिय कार्यक्रम स्वर्णिम संगम, मनोरञ्जन एक साथ र चलचित्र र संगीत निर्माण तथा प्रस्तुत गर्छन् ।
उनले रेडियोमा आरजेका रुपमा मात्र हैन, टेलिभिजनमा भीजेका रुपमा पनि शिखर मानक बनाएका छन्, बेञ्चमार्क स्थापना गरेका छन् । उनले नेपालका अधिकांश टेलिभिजनमा चलचित्र र संगीतमा आधारित कार्यक्रम बनाएर प्रस्तुत गरेका छन् । यस क्रममा सरोजले नेपालको पहिलो स्याटलाइट टेलिभिजन स्टेसन च्यानल नेपालका लागि सन् २००२ मा नेपालमा पहिलो लाइभ फोन इन म्युजकिल शोको नयाँ अध्याय शुरु गर्दै १२०० श्रृंखला प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर नयाँ बेञ्चमार्क पनि बनाए । उनले नेपालको राष्ट्यि टेलिभिजन च्यानल नेपाल टेलिभिजनमा पप संगीतमा आधारित सांगीतिक कार्यक्रम पपयात्रा, पहिलो रियालिटी शो सुपर भीजे कम्पिटिसन सञ्चालन गरेर रियालिटी शो को नयाँ आयाम सुरु गरे । यस बीचमा उनले नेपालका अन्य टेलिभिजन च्यानलहरु सगरमाथा टेलिभिजन, न्यूज २४, एनटीभी प्लसमा पनि चलचित्र र संगीतसम्बन्धी मानक कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।
नेपाली आरजे र भीजे क्षेत्रका यी शिखर ब्यक्तित्वको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि उच्च छ । यही क्रममा उनले नेशनल अवार्ड, निफ अवार्ड र कृति अवार्डजस्ता अन्तर्राष्ट्यि तथा राष्ट्यि अवार्डको निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । यस अतिरिक्त मिस मंगोल, मिस लिटल आइडल, ए वन पोखरा क्विनजस्ता सौन्दर्य प्रतियोगिताको निर्णायकका रुपमा पनि उनले आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाएका छन् ।
सरोजको जीवनको अर्को एक अभिन्न पाटो हो, समाजसेवा । उनले जेसिज, रोट्याक्ट, रेयुकाइजस्ता सामाजिक संघसंस्थामा रहेर एक कलाकार, सञ्चारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताका रुपमा अतुलनीय योगदान गर्दैआएका छन् । यही क्रममा सन् २०१२ मा नेपालमा आएको महाभूकम्पमा परेका पीडितहरुको लागि उनले मिडिया क्याम्पेन मात्र गरेनन्, टिम बनाएर, भूकम्प गएको ठाउँमै गए र लाखौंको च्यारिटी पनि गरे । मुलुक र मुलुकबासीलाई आवश्यक परेको बेला निर्वाह गरेकोे यो मानवीय एवं नागरिक दायित्वका लागि उनी सरकारबाट प्रशंसित पनि भए ।
नेपाली सञ्चारकर्ममा खासगरी आरजे र भीजेलाई मूलधारका सञ्चारकर्मीका रुपमा स्थापित गराउने अभियन्ता सरोजका बारेमा अग्रज सञ्चारकर्मी डा. प्रदीप भटटराई भन्छन्, सरोज नेपाल र नेपालीले गर्व गर्नलायक एक मिडिया पर्सोना हुन् । नेपाली आरजे र भीजेलाई मूलधारको सञ्चारकर्मीका रुपमा स्थापित गराउन उनले निर्वाह गरेको भूमिका आफैंमा बेञ्चमार्क हो । उनले यस क्रममा अनेकौ कीर्तिमान पनि बनाएका छन् । ती सबै मानक कार्यका कारण उनी नेपाली सञ्चारकर्ममा कहिल्यै नमेटिने इतिहासको पाना मात्र हैनन्, अध्याय नै साबित भएका छन् ।
शनिवार, २०७३ फाल्गुन १३ गते ०१:५३ / Saturday, Feb 25, 2017 1:53 am